सुरक्षित गर्भपतन रोज्नेको संख्यामा दृद्धि तर न्यूनिकरणमा चुनौती ! | जनदिशा
सुरक्षित गर्भपतन रोज्नेको संख्यामा दृद्धि तर न्यूनिकरणमा चुनौती !
सुनसरी, २० भदौ । कुनैपनि गर्भवती महिलाको हकमा मञ्जुरीमा कानुनले मान्यता दिएअनुसार सूचिकृत स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सद्धारा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा गई कानुनको परिधिभित्र रही सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।
यद्यपी हाम्रो समाजमा सुरक्षित गर्भपतनको अवधारण अझै विकसित हुन भने सकेको छैन् । सरकारी तथ्याङक भन्दा निजी तहमा हुने गर्भपतनको अवस्थामा आकाश पातालको भिन्नता पाइन्छ ।
फरक यत्ति होे कानुन मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिने गर्भपतन सुरक्षित मानिन्छ । यसबाहेक अन्यको हकको असुरक्षित । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको तथ्याङक अनुसार पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१,,,,,,,,,,,,,७२ मा २ सय ३१ रहेको संख्या त्यसपछिको आवमा क्रमश वृद्धि हुदै ७ सय ५६, ९सय३६ र २०७४,,,,,,७५ सम्ममा आइपुग्दा १ हजार २ सय ९३ पुगेको छ ।
बढ्दो जनसंख्याका अनुपातमा यो संख्या निम्न भएपनि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदैजानु बढ्दो सचेतना र जागरुकताका कारण भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
इनरुवा अस्पतालमा आइपासको सहयोगमा आयोजित सुरक्षित गर्भपतन सेवा बारे लाञ्छना न्यूनिकरण सम्वन्धि संचारकर्मीसँगको अन्तरकृयाका क्रममा पब्लिक हेल्थ नर्स झरना गिरीले सरकारी तथ्याङकलाई मात्र हेरेर सन्तोष गर्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।
गिरीका अनुसार स्विकृत प्राप्त सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने सुरक्षित गर्भपतनको अनुपातमा चार गुणा बढी निजी क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिने गर्भपतनको संख्या बढी छ ।
दक्ष र अनुभव प्राप्त स्विकृत स्वास्थ्य संस्था बाहेकको हकमा गरिने गर्भपतन असुरक्षित हुने हुनाले निम्तन सक्ने जोखिम प्रति स्वयं सहज हुन आवश्यक रहेको इनरुवा अस्पतालकी मेसु डा. बिना शाक्य बताउँछन् ।
सामान्यतया गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ सातासम्म गर्भपतन गराउन सकिन्छ । जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ १८ सातासम्म गर्भपतन गराउन सकिन्छ । त्यसैगरी ज्यानै जान सक्ने अवस्था र स्वास्थ्य गम्भिरताका आधारमा दक्ष चिकित्सकको राय अनुसार सम्वन्धित महिलाको मञ्जुरी र वेहोसीको हकमा आफन्तको सहमति आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ को दफा १८९ मा व्यवस्था गरिए बाहेकको हकमा कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भ पतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी गर्भपतन कसुर गर्ने वा गराउने कार्य गैर कानुनी ठहरिने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न उपर कैद तथा जरिवाना समेतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार एक पटक गर्भपतन गराइसकेपश्चात स्वस्थ्यमा सुधार आउन कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने गर्दछ । यूएनएफपीए सुनसरी संयोजक काशी पोखरेलका अनुसार गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्पका रुपमा लिइनु हुँदैन् ।
पहिलो प्राथमिकता परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगनै भएकाले सोही परिपाटीको चेतना र जागरुकता जगाउन मिडिया लगायत सरोकारवाला हरुको प्रमुख दायित्व रहने पोखरेलको भनाई छ । सुनसरीमा इनरुवा अस्पतालसहित नेपाल सरकारबाट मान्यता पाएका १८ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिन सकिन्छ ।
आइपासको सहयोगमा १९ जिल्लाका २१ वटा अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालित रहेको छ ।
Previous Previous post: कक्षा १ मा पढ्दै ७५ बर्षीया हजुर आमा !
Next Next post: एक सुत्केरीको मृत्यु,स्वास्थ्य चौकीमा तालाबन्दी